vendredi, 20 octobre 2017 18:20
Campus Ambondrona: Nodiovin'ny mpiasan'ny oniversite ny bloc
Taorian'ny nanesorana ireo mpianatra rehetra teny amin'ny bloc, toy ny hita amin'ny sary ny korontana sy loto tavela miparitaka etsy sy eroa.
Nanadio ireo bloc ireo sy ny tao anatin'ny campus ireo mpisan'ny oniversite rehetra ary nanao désinsectisation mba ho fisorohana ny aretina pesta. Nisy ireo entan'ireo mpianatra mbola tavela tany anaty efitrano ka natokana tamin'ny gony ary naverina tao anaty efitrano ihany avy eo.
Anisan'ny fepetra tsy voahajan'ireo mpianatra ny fahadiovana sy fanadiovana ny toerana honenan'izy ireo eny amin'ny oniversite. Tafiditra eny hatramin'ny mpivarotra zava-pisotro mahamamo sy zava-mahadomelina.
Ny filohan'ny oniversite Rakotoarivony Andrianony Emmanuel no nitarika ny fanadiovana ary natrehan'ny Tale jeneralin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Hitohy amin'ny any ivelan'ny campus ny fanadiovana rahampitso.
vendredi, 20 octobre 2017 17:38
Fianarantsoa: Ho tanterahina eto ny fanolorana ireo mpikambana CFM eto amin'ny Farintany
Nanatanteraka fitsidihana ara-pomba fanajana, ny teo anivon'ny Kaominina sy ny Faritra, ny filoha lefitry ny Comité du Fampihavanana Malagasy.
RAOTOSAMY Honoré no kandidà misolotena ny faritr'i Matsiatra Ambony tao anatin'ny fifantenana manerana ny Nosy. Izy ihany koa no lany ho filoha lefitr'izany rafitra izany rehefa natsangana ny Birao Maharitra.
Efa nitantana fikambanana ara-pinoana fianakaviambe vinsansianina izy ary efa nikatroka ny antsoina hoe Fagnina, teto amin'ny faritra ihany koa tany amin'ny vanim-potoan'ny fifidianana.
Olona natolotry ny EKAR izy raha ny nambaran'ireo mpandinika ara-politika eto an-toerana.
Voalaza tao anatin'ny resaka nifanaovana tamin'ireo tompon'andraikitra roa tonta fa ny tananan'i Fianarantsoa no hampiantrano ny fanolorana amin'ny rehetra ireo mpikambana avy aty amin'ny Faritany misy.
vendredi, 20 octobre 2017 17:18
Mahajanga: Adiny 5 isan’andro no mandeha ny jiro
Misy fiantraikany amin’ny famatsiana jiro eto Mahajanga tampontanàna ny fahamaizana tao amin’ny foibe mpihary herinaratry ny orinasa Henri Fraise, izay miantoka ny 50%-n’ny jiro eto an-toerana.
Vokany adiny 5 isan’andro no mandeha ny jiro amin'ireo faritra maromaro toa an'i Tsararano sy ireo toerana somary mihataka ny renivohitra.
vendredi, 20 octobre 2017 16:12
Pr Zafy Albert: Hiazo an’i Betsiaka anio ny Razana
Nisy fotoam-pivavahana iraisam-pinoana notanterahina teto Ambilobe ny maraina, aorian’io dia hiazo an’i Betsiaka, lalam-pirenena faha-5A miazo an’i Vohémar, ny nofo mangatsiakan’ny filoha teo aloha Pr Zafy Albert.
“Fasandrazana nasian’i Pr Zafy fanatsarana fony fahavelony no handevenana azy rahampitso sabotsy 21 oktobra 2017. Vahoaka maro, avy amin’ny lafivalon’ny Nosy, mpanao politika, avy amin’ny fiarahamonim-pirenena no eto Ambilo be amin’izao”, araka ny fanazavan’i Pr Manoro Régis, Sekretera jeneralin’ny antoko UNDD.
(Sary nindramina, teo ampiaingana Ambilobe i tolak'andro io)
vendredi, 20 octobre 2017 16:02
LTP Ambatondrazaka: Anisan’ireo lisea teknika fito filamatra eto Madagasikara
Tamin’ny taona 1954 no niorina ny LTP Ambatondrazaka ary efa namoaka olomanga maro. Fanamby ankehitriny ny ahafahan'ny sekoly hiahy tena fa tsy hiantehatra lava amin’ny fanjakana.
Nisy ny fampitaovana notaon’ny UNESCO an’ity lisea teknika ity, hanatsarana ny fiofanana omeny.
vendredi, 20 octobre 2017 15:52
Antalaha: Efa tonga ao amin'ny polisy ireo mpiasan'ny aéroport
Efa eto amin'ny polisy amin'izao 03 ora izao ireo mpiasan'ny aéroport Antalaha 06 mianadahy. Ny Talen'ny aéroport no tsy mbola tonga, na dia amin'ny 03 ora aza ny fiantsoana.
Ho entin'ny polisy any amin'ny fampanohavana rehefa amin'ny 04 ora tolakandro.
Meavatanana: Instauration d’un « couvre-feu »
Face à la recrudescence de l’insécurité dans la région Betsiboka, notamment à Maevatanana, l’OMC (Organe Mixte de Conception) s’est réuni hier jeudi 19 octobre 2017.
Il a été décidé d’instaurer un « couvre-feu ». Ainsi, il est interdit à toute la population de circuler entre 21h et 4h du matin, sauf en cas de maladie, exception aussi pour les taxi-brousses reliant Antananarivo et Mahajanga, qui passent sur Maevatanana.
vendredi, 20 octobre 2017 14:37
Faritra Boeny: Hanao fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana ho an'i Pr Zafy Albert
Ankoatra ny maha andro fisaonam-pirenena ny sabotsy 21 oktobra 2017, dia hanao hetsika manokana ho fahatsiarovana ny filoha teo aloha Pr Zafy Albert ny faritra Boeny, ka hisy ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana hatao rahampitso ao amin'ny Tranoben'ny kolontsaina manomboka amin'ny 09 ora maraina, izay hanasana ny mponin'i Mahajanga rehetra mba ho fanomezam-boninahitra ity Rain'ny Demokrasia sy ny Fampihavanana ny Malagasy ity.
Nanambara ny lehiben'ny faritra Boeny, Saïd Ahamad Jaffar fa hentitra amin'ny fanaraha-maso mandritra ny fisaonam-pirenena ny amin'ireo hetsika rehetra, voarara rahateo ny fisokafan'ireo toeram-pivarotana sy fisotroana zava-pisotro misy alikaola.
vendredi, 20 octobre 2017 14:21
Aéroport Antalaha: Fermeture temporaire ce vendredi 20 octobre 2017 de 15h-18h
Suite à une plainte d'un passager qui a utilisé un avion privé, immatriculé 5R MKJ, pour affréter ses 86kg de vanille vers Mananara Nord, le colis manquait de 10kg à l'arrivée.
Tous les personnels de l'aéroport sont convoqués au parquet ce jour.
L'aéroport se trouve être fermé temporairement de 15-18h.
Aéroport Antalaha: Hikatona vonjimaika
Nilatsaka ny NOTAM. Hikatona vonjimaika anio zoma 20 oktobra eo anelanelan’ny amin’ny 3ora ka hatramin’ny 6ora tolakandro ny seranam-piaramanidina Antsirabato Antalaha.
Ny antony dia hiakatra fampanoavana anio ilay raharaha nahaverezana entana (lavanila) milanja 10kg amin’ny 86kg an’ny mpandeha iray niainga tao Antalaha niazo an’i Mananara Avaratra, tamin’ny fiaramanidina manokana 5R MKJ herinandro vitsy lasa izay.
Nitondra ny raharaha teny amin’ny Fitsarana ny tompon’ilay lavanila. Voasaringotra tamin’io fahaverezana entana io avokoa ny mpiasa ao amin’ny Aéroport Antalaha, ka mitarika izao fikatonana vonjimaika izao.